गुण्डाको कारण प्रहरीमा द्वन्द्व: बलु पौडेल हत्याकाण्डमा काठमाडौँका गुण्डाको पनि हात ! – Etajakhabar
गुण्डाको कारण प्रहरीमा द्वन्द्व: बलु पौडेल हत्याकाण्डमा काठमाडौँका गुण्डाको पनि हात !
काठमाडौं, २३ पुस । विदेशी भूमिमा लुकेर नेपालमा शृंखलाबद्ध व्यक्ति हत्या गर्ने समूहका नाइके पक्राउ पर्न नसक्दा आम जनमानसमा त्रासको वातावरण सृजना भएको छ । गतवर्ष रुपन्देहीको देवदहमा युवा संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको दिनदहाडै हत्या भयो । केही महिनाअगाडि काठमाडौंको गौरीघाटमा गुण्डानाइके दाबा लामामाथि गोली प्रहार भयो । मिस फायरका कारण दाबा घाइते मात्रै भए । गत असोज २३ गते काठमाडौंको शान्तिनगरमा अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको ज्यान गयो । यस्तै, प्रकृतिको घटना गत शुक्रबार रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकास्थित खैरेनीमा घट्न पुग्यो । काठ मिल सञ्चालन गर्दै आएका बलु (बसन्त) पौडेल अज्ञात समूहको शिकार भए । शुक्रबार अपराह्न आफ्नै काठ मिलमा बसिरहेको बेला मोटरसाइकलमा आएका दुई व्यक्तिले पौडेललाई गोली हानेर भागे । छातीमा गोली लागेका उनलाई अस्पताल पु¥याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भयो ।
चौध महिनाको अवधिमा भएका यी तीनवटै घटनामा रुपन्देही देवदहकै स्थानीय मनोज पुन र काठमाडौं बाफलका गुण्डा नाइके समिरमान बस्नेतको समूहको संलग्नता देखिएको प्रहरी दाबी रहँदै आएको छ । गौचन हत्याका मुख्य योजनाकार बस्नेतलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले चितवनबाट पक्राउ गरेको दाबी गर्दै अहिले थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । बस्नेत अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन् भने पुन फरार छन् । सीआईबीले मङ्सिर १६ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर बस्नेतलाई चितवनबाट पक्राउ गरेको दाबी गरेता पनि त्यसपछिका घटनाक्रम र अनुसन्धानको प्रकृति हेर्दा केही न केही गडबडी रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
बस्नेतलाई पक्राउ गर्दा उनको साथबाट प्रहरीले केही पनि बरामद नभएको दाबी गरेको छ । ‘सामान्य अभियुक्त पक्राउ गर्दा साथमा भएको मोबाइल गरगहनासमेत बरामद गर्ने प्रहरीले बस्नेतको साथमा केही पनि भेटेन होला र ? इन्टरनेट कलमार्फत व्यापारी धम्क्याउँदै फिरौती लिन बस्नेतले प्रयोग गर्ने मोबाइल, ल्यापटप र असुलेको रकम बरामद किन गरिएन ? अहिले सीआईबीको अगाडि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । जटिल र गहन किसिमका अपराधको सफल अनुसन्धान गर्दै आएको सीआईबी बस्नेत काण्डमा कहाँनेर चुक्यो ? समीक्षा हुनु जरुरी देखिन्छ । सुशासन साप्ताहिकमा खबर छ ।
असोज २३ मा गौचनको हत्यापछि प्रहरी मुख्यालयले डीआईजी गणेश केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । समितिमा महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी अजय केसी, विशेष ब्युरोका एसएसपी शेरबहादुर बस्नेत सदस्य छन् भने सीआईबीको तर्फबाट डीएसपी अंगुर जिसी र इन्स्पेक्टर दीपेन्द्र अधिकारी पनि उक्त समितिमा आबद्ध छन् । अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिने डीएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर र रुगम कुँवर पनि महानगरीय प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अनुसन्धानमा खटिरहेका छन् । समितिका सबैले अनेक तरिका अपनाउँदै संकलन गरेको सूचनाकै आधारमा सीआईबीका सई रमेश बजगाईंले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा बस्नेतलाई नेपाल ल्याएको बजारमा चर्चा छ ।
रुपन्देही घटनाको जिम्मेवारी पनि उनै मनोज पुनले लिएका छन् । जसरी यसअघिका घटनामा पनि उनैले जिम्मा लिने गर्थे । दिनदहाडै हत्याका घटना दोहोरिन थालेपछि प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै रुपन्देहीका जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । दुई दिनदेखिको रुपन्देही बन्दले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । प्रहरीको लागि मनोज पुनलाई पक्राउ गर्नु ठूलो चुनौती छ । तर, प्रहरीभित्रको आन्तरिक कलह र कामको जस लिने प्रतिस्पर्धाले अनुसन्धानमा बाधा उत्पन्न भएको यसअघिका घटनाले प्रष्ट पारिसकेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार पुन अहिले भारतमै लुकेर बसेका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, पौष २४, २०७४ समय: ८:१२:२१